mail- na ekwentị ndepụta | Holmbygden.se
Iji agbasakwa ozi na Holm district were were, anyị enwewo ihe e-mail- na ekwentị ndepụta. Olee otú anyị na-ekwurịta okwu nwere ike ịdị iche dabere na ihe kwesịrị ka a kwuru. Na mbụ nwere ike idunye kasị mfe mere site email, ma na mkpumkpu mara nwekwara ike fon na ederede na-eji.
Ozi banyere akwụkwọ nzukọ maka atụ, ga-posted na website na e-zigara. Ọ bụrụ na, Otú ọ dị, dị nnọọ hụrụ ụgbọala zuru ma ọ bụ nwere burglaries nwere ike ngwa ngwa uka SMS na-kasị adaba nhọrọ maka inweta ozi ngwa ngwa, site kpọtụrụ anyị.
Tinye ozi na nri na-eje ozi na-ọmụma.
Ị akwa ụta na ya mgbe e mesịrị na-achọghị ozi ọzọ, dị nnọọ kpaliri anyị na info@holmbygden.se na gwa.
Melite gị data
Ọ bụrụ na ị na-eguzo na-ama na Holm The ndepụta nwekwara ike ịbụ ezi echiche imelite gị nkọwa ebe a. Tinye ọhụrụ ọrụ na kwesịrị ekwesị ubi. Nwere ụfọdụ ozi kwụsịrị, dị nnọọ ụdị “kwụsịrị” n'okpuru kwesịrị ekwesị isiokwu.
* = (amanyere bụ iwu)
ekpe Holm (t.ex. \_"uppväxt i\_", \_"sommarstugegäst\_", \_"boende\_" wdg)*
site / Adress (t.ex. \_"Anundgård 122\_", \_"Sundsvall\_" wdg):
ekwentị mkpànaka 2 / na-arụ ọrụ:
eV. ozi, ụlọ ọrụ wdg. (t.ex. \_"Ordf. Drakabergets SK\_", \_"Peters Färg AB\_"):
BANYERE HOLMBYGDEN.SE Soro HERE
Uzo mkpirisi / ọhụrụ ozi ọma:
Holm Fiber - Ama na ndebanye aha na
Ski tracks i Anundgård / Vike
Gụọ ihe banyere skai tracks ebe a.
- ore Properties / Hakan Larsson Bilkonsult / Aros Energy declarations
ọzọ: Asịrị ụlọ / mgbapu Ulo.Close.
23/5: 200 achọ ka Holm ...
15/8: Mbugharị Board: Ọ dịghị mgbapu ...
16/3: Obodo 'nchegbu wee ezi ...
30/1: ịkpachara anya! Aros ịzụta obibi ...
12/12: Mittnytt na Holm on kvarlä ...
11/12: SR: Ọrụ ekpe ...
26/11: Aros ịchụpụ tenants ...
21/11: Lee iwu Review ...
20/11: SVT nyochaa Aros ...
12/11: "Asịrị ụlọ," na TV ...
11/11: MV: Ọ dịghị mgbapu ulo ...
10/11: Hamberg ọdọhọde inblan ...
7/11: S nke Sundsvall natara asylb ...
25/10: Emergency ọrụ oké egwu ...
17/10: Aros Energy. n'okpuru ọkụ ...
14/10: Links na Stendahl ...
10/10: Aros ụgha mbụ Migrationsv ...
9/10: Media Monitors skandalhus ...
4/10: Migration Board inyocha ...
17/9: 156 mgbapu achọ ka "asịrị ụlọ," na Holm!?
Deerenụ A Post / G UKWUO IN
OZI n'ime ime Holm
24/12: Nyspårat na Anundgå ...
5/10: New music video si ...
16/9: Sunday na 14: Light ...
Previous ozi ọma na NEWS wijetị Họrọ net February 2019 (2) January 2019 (1) December 2018 (1) October 2018 (1) September 2018 (4) August 2018 (1) July 2018 (5) June 2018 (6) Ka 2018 (6) April 2018 (2) March 2018 (2) December 2017 (2) July 2017 (2) June 2017 (1) Ka 2017 (4) April 2017 (2) March 2017 (4) February 2017 (4) January 2017 (1) December 2016 (2) November 2016 (1) September 2016 (4) June 2016 (5) Ka 2016 (5) April 2016 (3) March 2016 (6) February 2016 (4) January 2016 (2) December 2015 (3) November 2015 (4) October 2015 (1) September 2015 (5) August 2015 (4) July 2015 (4) June 2015 (3) Ka 2015 (7) April 2015 (4) March 2015 (4) February 2015 (4) January 2015 (8) December 2014 (3) November 2014 (4) October 2014 (5) September 2014 (3) August 2014 (4) July 2014 (2) June 2014 (6) Ka 2014 (5) April 2014 (8) March 2014 (11) February 2014 (4) January 2014 (7) December 2013 (12) November 2013 (12) October 2013 (10) September 2013 (9) August 2013 (15) July 2013 (13) June 2013 (18) Ka 2013 (17) April 2013 (13) March 2013 (11) February 2013 (7) January 2013 (13) December 2012 (9) November 2012 (9) October 2012 (6) September 2012 (10) August 2012 (10) July 2012 (4) June 2012 (11) Ka 2012 (10) April 2012 (4) March 2012 (7) February 2012 (6) January 2012 (3) December 2011 (3)
Nkume a NYHETSFÖRSLAG
Holms ide Igbe
Weather ịdọ aka ná ntị (SMHI, SR):
9/2: Utah: Warning klas 1, snoo na-ada, V... N'oge ehihie na Saturday pụrụ d ... GỤKWUO
21/2: E4 osisi-Sundsvall (T...
Brand i buss på E4 i höjd med Birsta
25/1: Välkomna till laget...
HSK uru SMS
ụka / parish
18/3: N'obere ụgbọala Chineke Tjänste ...
Mpaghara ọchụnta ego
24/5: Summer Premiere m C ...
19/12: Uwe ojii kwụsịrị maka ...
19/12: Ugbu a Ortviksparken ...
EME HOME →